नयाँ वर्षमा नेपाल टेलिकमको डे र नाइट प्याकमा अफरै अफर, कसरी सुचारु गर्ने ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नयाँ वर्षमा नेपाल टेलिकमको डे र नाइट प्याकमा अफरै अफर, कसरी सुचारु गर्ने ?
नयाँ वर्षमा नेपाल टेलिकमको डे र नाइट प्याकमा अफरै अफर, कसरी सुचारु गर्ने ?
चैत ३० गते, २०७५ - ११:४०
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुको सुविधाका लागि विभिन्न प्याकेज सहितको आकर्षक स्प्रिङ अफर ९क्उचष्लन इााभच० उपलब्ध गराएको छ । उक्त अफर अन्तर्गतको सेवा २०७५ चैत ३० गते देखि ९० दिनसम्म लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।यस अघि उपलब्ध विन्टर अफर अन्तर्गतका प्याकेजमा केही थप सुविधासहित स्प्रिङ अफर ल्याइएको छ ।
यस प्याक अन्तर्गत कम्पनीकै नेटवर्कमा जीएसएम÷सीडीएमएका ग्राहकले २० रुपैयाँमा प्याक एक्टिभ भएपश्चात् १ घण्टासम्म निरन्तर भ्वाइस, एसएमएस र डाटा असीमित रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने छन् । यसका अलावा दश मिनेटको थप बोनस गरी जम्मा ७० मिनेटसम्म असिमित भ्वाइस÷डाटा÷एसएमएस प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
विभिन्न प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले *1415# मा डायल गर्नु पर्ने छ । कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ बाट पनि यस सम्बन्धी जानकारी लिन तथा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी कम्पनीको वेबसाइट धधध।लतअ।लभत।लउ मार्फत यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी लिन सकिन्छ ।
(माथि उल्लेख गरिएका सबै दरहरु करसहितका हुन् ।)
चैत ३० गते, २०७५ - ११:४० मा प्रकाशित